1 Samoela 24 - Baiboly Masina [Malagasy Bible 1865] - (1Sam 24)
[Ny tsy netezan'i Davida hahafaty an'i Saoly, na dia azony tao an-johy aza] Ary Davida niakatra niala teo ka nitoetra tao amin'ny batery fiarovana tany En-jedy.
Koa mianiàna amiko amin'i Jehovah ianao ankehitriny fa tsy handringana ny taranako mandimby ahy ianao, ary tsy hovonoinao amin'ny mpianakavin'ny raiko ny anarako.Ary Davida dia nianiana tamin'i Saoly; ary dia lasa nody Saoly, fa Davida sy ny olony kosa niakatra nankany amin'ny batery fiarovana.
Ary Davida dia nianiana tamin'i Saoly; ary dia lasa nody Saoly, fa Davida sy ny olony kosa niakatra nankany amin'ny batery fiarovana.
1 Samoela 24:1
1 Samoela 24:2
1 Samoela 24:3
1 Samoela 24:4
1 Samoela 24:5
1 Samoela 24:6
1 Samoela 24:7
1 Samoela 24:8
1 Samoela 24:9
1 Samoela 24:10
1 Samoela 24:11
1 Samoela 24:12
1 Samoela 24:13
1 Samoela 24:14
1 Samoela 24:15
1 Samoela 24:16
1 Samoela 24:17
1 Samoela 24:18
1 Samoela 24:19
1 Samoela 24:20
1 Samoela 24:21
1 Samoela 24:22
1 Samoela 24:23